सरकारी भर्सेस निजी प्रयोगशालाः दुईथरी कोरोना रिपोर्टले जो सत्ता जाेड घटाउकाे कारण बनेMain Samachar
सरकारी भर्सेस निजी प्रयोगशालाः दुईथरी कोरोना रिपोर्टले जो सत्ता जाेड घटाउकाे कारण बने
१५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३६ प्रकाशित
पोखरा । पाक्न लागेको फलमा असिना पर्दा कस्तो हुन्छ ? यसको जवाफ अहिलेको परिस्थितीमा दुईथरीले मात्रै दिन सक्छन् ।
एउटा महिनौं दुःख गरेर बाली हुर्काएको किसान र अर्को गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । जो गण्डकीका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पनि हुन् ।
उनको दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई आज गण्डकीको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा चुन्दै थियो । तर उनी सहित उनको गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकार पाकिरहेको हेर्नसम्म पाए तर टिप्न नपाई असिना पर्‍यो ।
त्यसको चोट अहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङइतरको गठबन्धनलाई त परिरहेकै छ । त्यसको चर्चा तत्काललाई छोड्दै मूल चिजको चर्चा गरौं ।
जसको पर्दामा निर्णायक मानिएको दल जनमोर्चा बुधबार दिनभर चर्चामा रह्यो । कारण जनमोर्चाका बागलुङबाट निर्वाचित सांसद खिमविक्रम शाही सभाको विशेष अधिवेशन बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
उनी ‘अज्ञात’ भएको खबर चर्चामा आयो । उनकै दल जनमोर्चाकी सचेतक सांसद पियारी थापाले आफ्ना सांसद खिमविक्रम शाहीको खोजविन गर्न भन्दै सभाको कारवाही स्थगनको माग नै राखिन् ।
उनकै मागलाई शिरोपर गर्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि सभाको अधिवेशन स्थगन गरेको सूचना जारी गर्न लगाए सचिव हरिराज पोखरेल मार्फत ।
उसो त सांसद पियारी थापाले आफ्ना सांसद ‘अज्ञात’ रहेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रामशरण बस्नेतसमक्ष पनि निवेदन दिइन् । तर सोही समयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ‘अज्ञात’ भए भनिएका सांसद शाहीका स्वकीय सचिवले एउटा सार्वजनिक सूचना लेखे ।
‘माननीय शाही आज अचानक १२ बजेदेखि बिरामी भई उपचार भइरहेको छ । उपचारको सिलसिलामा आफ्नै भाई जुन विक्रम शाहीसँगै रहको जानकारी गराउँदछु । उहाँको मोबाइल अफ छ ।’
उनी हाल पोखराकै चरक मेमाेरियल हस्पिटलको कोभिड वार्डमा उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि भर्ना गरिएको हो ।
तर पनि उनको अवस्थालाई ‘अज्ञात’ भन्दै सभा अधिवेशन स्थगनको मागलाई सभामुख अधिकारीले तत्कालै पूरा गरिदिए ।
कार्यसूचिमा तय भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर मत विभाजनसहितको कारवाही अघि बढ्नै पाएन ।
सभामुखको उक्त निर्णयलाई एमालेका सांसदहरुले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै सभामुख अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
सरकारी भर्सेस निजी प्रयोगशाला
एउटै व्यक्तिको एकैदिन त्यहीँ पनि केही घन्टाको आसपासमा लिइएको स्वाबको परीक्षणमा कसरी फरक नतिजा आउन सक्छ ?
त्यसको उदाहरण बनेका छन्, जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही । जो गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउनका लागि निर्णायक मत थिए ।
उनै सांसदको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र पोखराकै निजी प्रयोगशाला लाइफ केयर डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च सेन्टरले गरेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट दुईथरी देखाएको छ ।
वैशाख १४ गते मंगलबार लिइएको स्वाबको रिपोर्ट वैशाख १५ गते बुधबार (आज) बिहान ७ः२० बजे प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नेगेटिभ दिएको छ । यसले उनमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गर्दैन ।
तर ठीक त्यसको विपरित लाइफ केयर डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च सेन्टरले वैैशाख १४ गते साँझ ४ बजे लिएको स्वाबको रिपोर्ट वैशाख १५ गते बिहान ७ः३० बजे दिँदा पोजेटिभ देखाएको छ । जसले उनमा संक्रमण पुष्टि भएको बताउँछ । जसबाट सरकारी र निजी प्रयोगशालामा भएका परीक्षणको विश्वनियतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रयोगशालाको परीक्षणमा जाँच आधिकारिक निकायले गर्लान्/गर्नुपर्छ । उता गण्डकीमा सत्ताको रस्साकस्सीले ध्यान तानिरहेका सांसद शाहीलाई ‘बन्दी’ बनाएको आरोप कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारमाथि लगाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सरकारी प्रयोगशालाको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका छन्, ‘यो हेर्नुस् । गण्डकी प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाहीको कोभिड परिक्षण नेगेटिभ आएको रिपोर्ट !’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘स्वस्थ, तन्दुरुस्त मान्छेलाई पृथ्वीचोकको चरक अस्पतालको आइसियुमा कसैलाई भेट्न नदिएर किन राखिएको छ ? उपचारका नाममा बन्दी ? अविश्वासमा मत दिन रोक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी ?’
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक), जसपाका २ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । जनमोर्चाका ३ जना सांसद कृष्ण थापा, पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीलाई केन्द्रीय कमिटीले अविश्वासको पक्षमै मतदान गर्न सर्कुलर गरेको थियो ।
तर निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका सांसद आफैं संक्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना भएपछि गठबन्धनलाई आवश्यक ३१ मत नपुग्ने देखिन्छ ।
अर्का स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पछिल्लो अभिव्यक्तिमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध आफू जान नसक्ने बताएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेको २७ मत छ । त्यसमा माधव पक्षका भनिएका बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा एकजना मात्रै हुन् ।
आजको कार्यसूचिअनुसार मतदान भएको भए सांसद सापकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने थियो ।
हेर्नुहाेस्, सरकारी प्रयाेगशालाकाे रिपाेर्ट जसमा नेगेटिभ छ:
हेर्नुहाेस्, निजी प्रयाेगशालाकाे रिपाेर्ट जसमा पाेजेटिभ छ: